3 Mfe Idozi Na Sistemụ gam akporoUI akwụsịla Njehie
3 Mfe Idozi gam akporo SystemUI akwụsịla Njehie
28th nke February 2018
Gam akporo SystemUI
Nke a njehie bụ nkịtị na gam akporo ngwaọrụ. Ọ na-agbapụta na ihuenyo gị, na-egbochi ihe ọ bụla ị na-eme. O nwere ike ịbụ ihe na - emegharị anya.
Mgbe nke a mere, ị hụrụ ihe dịka nke a… ”N’adịghị mwute, usoro com.android.systemui akwụsị”
Mgbe ozi a gosipụtara, enwere bọtịnụ OK nke onye ọrụ nwere ike ịpị ma gaa n'ihu na ihe ọ na-eme. Mana nke ahụ apụtaghị na ọ gaghị apụta ọzọ. Ọ bụghị mezie njehie ahụ.
Dị ka ọ dị, SystemUI kwụsịrị ekwesịghị ịbụ nnukwu nsogbu, mana mgbe ọ na-adịkarị na mgbe niile, mgbe ahụ enwere mkpa ọ bụla iji dozie ya.
Kedu ihe kpatara njehie SystemUI a?
Gam akporo ngwaọrụ mkpa ka emelitere mgbe niile. A na-ewepụta mmelite ndị a maka nsogbu dịgasị iche iche nke na-esite na nkwụsị nke chinchi na nsụgharị ndị gara aga, na-eme ka ọrụ niile nke ngwanrọ ahụ dịkwuo mma. Mana ọ bụghị nkwalite niile na-akwụsị nke ọma.
Mmelite na gam akporo dabere na Google App. Nke a na-eji ngwa na-akasị eleghara anya site na ekwentị ọrụ; ha chere na ọ dịghị ha mkpa. Mgbe ụfọdụ naanị imelite ngwa niile ma ọ bụ ọkachasị ngwa Google nwere ike idozi esemokwu a.
Ihe ọzọ kpatara nke a nwere ike ime bụ nrụnye na-ezighi ezi nke ngwa ngwa yana ikpuchi nke ROM. Ndị a bụ akụkụ dị mkpa nke ekwentị ahụ na mgbe ihe ọ bụla na-ezighi ezi na ya, ekwentị ahụ na-enweta nhazi ọdịda dịka com.android.systemui akwụsịla ”njehie.
Etu ị ga - esi dozi njehie a
1. Deactivate Apps Auto-Update on Google Play ụlọ ahịa na iwepụ mmelite na Google App.
Ngwa Google dị ezigbo mkpa na ngwaọrụ gam akporo. Ọ bụrụ na SystemUI anaghị azaghachi njehie na-apụta na ihuenyo gị, gaa na ngwa Google ma wepu mmelite ọ bụla na-adịbeghị anya. Nke a bụ otu esi ewepu mmelite Google App:
Gaa na ntọala> ngwa> App Manager.
Pịgharịa gaa na ala ịchọ Google App, mepee ya ma ị ga - ahụ nhọrọ maka iwepụ mmelite. Pịa iji wepu mmelite ya, wee malitegharịa ekwentị gị. Okwu a ga-edozi.
Nhọrọ ọzọ na-abata ma ọ bụrụ na nke dị n'elu adịghị edozi nsogbu ahụ maka gị.
2. Hichapụ Cache nkebi
Otu ụzọ idozi esemokwu a bụ site na ihichapụ ihe nzuzo ekwentị gị. Ime nke a oge niile nwere ike ịhapụ ekwentị gị, mee ka ọ dị ọcha ma dị mfe. Ikpochapụ cache nkebi, ekwentị gị kwesịrị-etinye na mgbake mode. Onye ọ bụla nwere ụzọ dị iche iche iji banye na mgbake, biko rụtụ aka na akwụkwọ ntuziaka gị ma ọ bụ mee nyocha dị n'ịntanetị.
Mgbe na ọnọdụ Iweghachite, ịnwere ike pịgharịa nhọrọ ndị ahụ site na iji bọtịnụ olu dị ala.
Pịgharịa gaa na ala ma họrọ hichapụ cache nkebi nhọrọ ma chere. Mgbe emechara, regharịa ekwentị gị. Reboot nhọrọ dị n'elu nke nhọrọ na menu.
3. Weghachi ekwentị na Ntọala ụlọ ọrụ.
Nke a kwesịrị ịbụ njedebe ikpeazụ gị; Otú ọ dị, ọ bụ ezigbo ndabere ka mpụga nchekwa ngwaọrụ ma ọ bụ na ígwé ojii dị ka a Factory Tọgharia erases ihe niile na ekwentị gị. Nhọrọ dị ngwa bụ Google Drive.
Nzọụkwụ Tọgharia ekwentị na ntọala ụlọ ọrụ
Mepee Ntọala na ekwentị gị
Pịgharịa gaa na ndabere ma Tọgharia
Enweta na Factory Tọgharia na ichicha ihe niile
Pịa Ok mgbe a gwara gị ka ọ kwenye.
Ekwentị gị ga-amalitegharịa mgbe ị rụchara ọrụ nrụpụta ụlọ.
Atụ anya ka ị nwee ike idozi okwu a. Hapụ ikwu n'okpuru na ngalaba nkọwa.